Kwidziridzo, Kukadzi 24, 2020 (3: 45 AM ET): Takagadziridza chinyorwa chepakutanga nemamwe mifananidzo inofungidzirwa-pama-OnePlus 8 Pro. Isu takawedzera ruzivo nezve chikonzero nei isu tichitarisira kushaiwa wairesi pane OnePlus 8 nhepfenyuro, pamwe neiyo yakatsanangurwa yekutanga nguva yemafoni.
Chinyorwa chekutanga, Gumiguru 18, 2019 (2: 29 AM ET): In 2019, OnePlus yakaburitsa mamwe mafoni kupfuura zvaraive riinaro mune rimwe gore rapfuura. Muna 2020, iyo kambani hazvingakwanisi kudzikira, sezvo isu tatova nerunyerekupe ruri kuratidza kuti OnePlus 8, pamwe ne OnePlus 8 Pro, vari munzira.
Isu tine zvakare runyerekupe rwakasimba rwekutaura kuti pane nyowani yepakati-dhizaini kana bhajeti mudziyo unouya kubva kukambani, yatiri kutaurisa zvine mutsindo inonzi OnePlus 8 Lite. Kana ikaita nyika, ichave yekutanga isiri-yekuremekedza foni chigadzirwa kubva kukambani kubvira OnePlus X, iyo yakatangwa muna 2015.
Heano runyerekupe rwatiri kunzwa kusvika parizvino nezve OnePlus 8, OnePlus 8 Lite, uye OnePlus 8 Pro. Ive neshuwa yekumaka peji ino sezvatinozoichinjisa kazhinji neruzivo rutsva sekuuya kwechiedza!
OnePlus 8 dzakatevedzana: Izita uye zuva rekuburitswa
OnePlus yakanaka kwazvo pakuchengeta yakakosha ruzivo nezve inouya zvigadzirwa zvakavanzika. Saka nekudaro, isu hatisati tine chero humbowo hwekuti foni inotevera inotanga kubva kukambani inozivikanwa se OnePlus 8 mfululizo. Nekudaro, pakange pasina chinoratidza kuti kambani ichachinja chirongwa chayo chekupa mazita, saka tinogona kuva nechokwadi chekuti OnePlus 8 pamwe nekumusoro-kugumisa hama yake OnePlus 8 Pro ndizvo zvichave zvichiziviswa nekambani munguva pfupi.
Iyo OnePlus 8 Lite, zvakadaro, yakawanda yekadhi remusango. Iyo "Lite" moniker inoita kunge ine musoro, asi iyo yekupedzisira OnePlus payakaburitsa bhajeti-inofunga mudziyo iyo yakaenda izita nyowese izita mune OnePlus X. Naizvozvo, zvinokwanisika kuti OnePlus 8 Lite igove ine rimwe zita rakasiyana zvachose. kunyangwe iyo OnePlus X 2 (kunyangwe izvo zvinoita kunge zvisingaite).
Kusvikira tanzwa neimwe nzira, ticharamba tichishandisa iyo OnePlus 8, Pro, uye mazita eLite.
Kana iri yezuva rekuburitsa zvinhu zvese izvi zvigadzirwa, zvinoita kuti tichavaona vachivhura nekukurumidza kupfuura zvanga zvichitarisirwa. The OnePlus 7 uye OnePlus 6 zvese zvakatanga munaMay uye OnePlus 5 yakatanga munaJune. Tipster Ishan Agarwal ane Yakataurwa kuti OnePlus 8 uye OnePlus 8 Pro ichazarura kumwe kunanga kupera kwaKurume kana Kubvumbi.
Hapasisina kana izwi pariri pamusoro pekutanga kwe OnePlus 8 Lite, hazvo, inogona kunyatsoburitsa pamwe chete ne OnePlus 8 uye 8 Pro.
OnePlus 8 mutsara: Dhizaini
Isu tatoona rakaburitswa rinopihwa zvese zvitatu zvezviridzwa zvine ruzha mumhuri yeOnePlus 8. Kuvuza kunobva kune kwakavimbika sosi @OnLeaks kuburikidza nehukama Cash Karo uye 91Mobiles. Saka nekudaro, tine chivimbo chekuti idzi shanduro dzinotipa iwo zano rakanaka reiyo OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, uye OnePlus 8 Lite.
Ngatiende pamusoro pechinhu chimwe nechimwe.
Iyo OnePlus 8 inotaridzika zvakasiyana zvishoma kubva kune yakafanotangira, iyo OnePlus 7, iyo pachayo yaingotaridzika zvishoma zvakasiyana kubva kune yayo yekutanga, iyo OnePlus 6T. Iyo yekumashure kamera system yakarongedzwa mune imwechete fashoni ine yakagadzirirwa, yakatarisana-yakatarisana-yakarukwa. Nekudaro, lens yechitatu inowedzerwa, iri yakanaka kusimudzira.
Mberi, iyo notch yemvura isisipo. Panzvimbo iyoyo, OnePlus inoita kunge iri kuenda munzira yekubaya-gomba nekuwedzera imwechete selfie lens sekucheka kukona yekumusoro kuruboshwe.
Related: Heano anofungidzirwa OnePlus 8 anodudzira
Iyo yakajairwa OnePlus bhatani dhizaini inosara nevhorumu rocker kuruboshwe uye bhatani remagetsi uye yambiro yekutsvedza kurudyi Iyo USB-C doko iri munzvimbo yayo senguva dzose uye hapasipo 3.5mm musoro wefoni.
Ramba uchifunga kuti OnePlus 7 haina kuona kuvhurwa kuUnited States, saka zvinogoneka kuti nzvimbo zhinji dzepasi pano hadzimboona mudziyo uyu mumasherufu ezvitoro. Musoro kune iyo Mutengo uye Kuwanika chikamu kune zvimwe pane izvi.
Kubva kumashure, iyo OnePlus 8 Pro haina kuita seinotarisa kune ese akasiyana neayo OnePlus 7T Pro. Iyo kamera kamera, kusanganisira yekuruboshwe-ye-pakati ToF sensor, dzose dzakarongedzwa mune yakafanana nenzira imwechete mune izvi kudhindwa sezvavanoratidzika pane 7T Pro.
Anofungidzirwa maoko-pane mufananidzo weOnePlus 8 Pro akaiswawo (kuburikidza Slashleaks) munguva pfupi yapfuura. Yakaturunurwa kubva kune imwe chete yepamutemo OnePlus discord server uye inofanirana neyaratidzwa pamusoro Iwe unogona kuona mufananidzo pazasi.
Pamberi ndipo panowanikwa zvinhu zvinonakidza. The OnePlus 7 Pro uye iyo OnePlus 7T Pro inoratidzira yese-screen kuratidza isina notch uye isina cutouts. Izvi zvaigoneka nekuda kweiyo pop-up selfie kamera system pane ese magetsi. PaOnePlus 8 Pro, zvakadaro, kambani inoratidzika kunge yakasiya hurongwa uhu, ichisarudza kuita punch-hole cutout sezvatakaona pane OnePlus 8 renders.
Anofungidzirwa maoko-pane mufananidzo wekumberi kwefoni zvakare inopindirana iyo punch-hole kuratidza dhizaini pamwe nezvimwe zvigadziro zvefoni. Iwe unogona kuona iyo mufananidzo pazasi.
Vamwe vanogona kuona izvi sekuregedzera sezvo zvese-zviso-skrini zvaive zvakasarudzika yeiyo 7 Pro uye 7T Pro. Nekudaro, OnePlus inogona kunge iri kuita ichi nechikonzero chakanaka: zvinokwanisika iyo OnePlus 8 Pro inogona kunge iri yekutanga IP-yakasimbiswa kifaa kubva kumhando. Zvakaoma kwazvo kune mudziyo une makina pop-up kamera kuti uwane chiyero cheIP, saka OnePlus inogona kunge yakazvibayira kuti iwane zvitupa. Hatigone kufunga nezvechimwe chikonzero OnePlus yaizopa dhizaini yayo-yese, yaive yakakwirira-mbiri chimiro yeiyo 7 Pro uye 7T Pro michina.
Kana iwe uchitova OnePlus 7 Pro kana OnePlus 7T Pro muridzi, iwe unozofanirwa kuzvisarudzira wega kana kurasa pop-up selfie kamera mune OnePlus 8 Pro kukwidziridzwa kana kudonha.
Imwe Plus 8 Lite
Zvinoenderana neaya akaburitswa, iyo OnePlus 8 Lite chishandiso icho chakanyanya kusiyana nechero imwe foni yeOnePlus. Iyo kamera bump kumashure haina kuratidzika senge chero yatakamboona pane OnePlus chigadzirwa uye kumberi kunoratidzika kwakasiyana kwazvo kubva kune mamwe ekunyorwa mu8 akateedzana.
Izvo zvinofanirawo kucherechedzwa kuti takaona rakaburitswa chaiko-hupenyu mifananidzo zvinoratidzika kuratidza OnePlus 8 Lite prototype. Izvi zvinotipa chivimbo chakawedzerwa kuti izvo zvadudzirwa pamusoro apa ndizvo chaizvo. Tarisa uone mufananidzo uyu pano:
Runhare rwekutanga iwe rwaunogona kuona nzira yese yekurudyi isofa rinofa kune idzi @OnLeaks renders. Nekudaro, zvinoita sekunge ine katatu-lens kamera mune iyo chaiyo-hupenyu chifananidzo, saka izvo zvinopihwa zvingave zvisiri izvo pamusoro peizvozvo. Tinenge tichifunga kuti prototype ndiyo chete iyi: prototype. Kana zvirizvo, maviri-lensi system pane kumashure inonyanya mukana kune ine bhajeti-inofunga dhata.
Kunyangwe iyi foni ichidaidzwa kuti OnePlus 8 Lite kana kuti kwete, zviri pachena chipenga chinodhura. Iyo ine gorofa kuratidzwa kwete iyo yakakombama, inoita kunge iine mairi lens kumashure pane matatu kana mana, uye yakakura kuratidza bezels. Nehurombo, OnePlus haisati iri kuunza jackphone yemusoro, kunyange mamwe makambani akazviita nemadhara avo anodhura, kusanganisira Google neHuawei.
OnePlus 8 yakatevedzana: Mhando uye maitiro
OnePlus yakadzora maratidziro mashoma ane chekuita neye OnePlus 8 akateedzera. Ngatimhanyei pamusoro pe izvo zvakasimbiswa kutanga uye tobva tapinda mune zvekufungidzira.
PaCES 2020, OnePlus yakasimbisa kuti iyo OnePlus 8 yakatevedzana ichaverengera 120Hz inoratidza zororo reti. Izvi zvitsva zvinoratidza huya neruremekedzo rwe Samsung. Uku kukura kwakakura pamusoro peiyo 90Hz yekuratidza kuwedzeredza mitengo iripo pane OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, uye OnePlus 7T Pro.
Nekudaro, hazvigoneke kuti iyo OnePlus 8 Lite ichaisa kumusoro iyo yeiyero yekuzorodza. Zvisinei, usanonoka, nekuti OnePlus yakavimbisa gore rapfuura kuti foni yega yega yainoburitsa ichave ne 90Hz yekuratidzira zororo rekuenda mberi, saka kunyangwe iyo bhajeti-inotungamirwa yekupinda inofanirwa kunge iine yakakwirira yekuzorodza mwero kupfuura yakajairwa 60Hz.
Kunyangwe isina kunyatso kusimbiswa ne OnePlus, seti yemasiraidhi emharidzo yakadonhedzwa (muchiChinese) simbisa kuti OnePlus 8 uye OnePlus 8 Pro ichauyawo neiyo MEMC chip. MEMC inomiririra Motion Estimation uye Motion Kutsiva uye inowanzoita tekinoroji inowanikwa pane terevhizheni. Iyo inosungira mafiramu matsva pakati peiyo iripo muvhidhiyo kuderedza kufambisa blur.
OnePlus 'MEMC tech inogona kunge ichikwira yakaderera mafuremu chiyero mavhidhiyo kusvika kumaawa akakwana emafiramu zana nemakumi maviri pamasekondi, ichiita kuti iwo mufananidzo uwedzere uye uve wakasarudzika. Kana izvi zvichinyatsoshanda sezvazvinofungidzirwa, zvinogona kureva zvirinani zvirinani mutambo wekutamba pane ramangwana OnePlus mafoni.
Kupfuurirazve, OnePlus '120Hz kuratidzwa kune chiyero chekubata che 240Hz uye chinogona kunge chakarova 1,000 nits kupenya kwakanyanya. Iyo inogadziriswa nechinhu OnePlus inodaidza Smooth Chain tekinoroji. Nekudaro, ruzivo rwunoshaya panguva yekutenda kune ruzivo rwechokwadi rwuri kuwanikwa muChinese chete.
Kunyangwe hazvo pasina kuziviswa kwepamutemo, zvakanyatsonaka zvakapihwa kuti OnePlus 8 uye OnePlus 8 Pro inozove inoratidza ichangoburwa. Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Hakuna kumbobvira kwave nerumbidzo OnePlus smartphone isina ichangoburwa Qualcomm 800 nhepfenyuro SoC, saka isu tiri chaiko chokwadi izvi zvichabatanidzwa.
Ne Snapdragon 865 iri pabhodhi, ese ari masere uye 8 Pro angave ari 8G-akagadzirira, sezvo iyo 5 ine 865G modem yakavakirwa-mukati.
Saizvozvovo, ese mafoni eOnePlus akaburitswa kupfuura gore rapfuura anga aine mashoma matanhatu e6GB ye RAM uye 128GB yekuchengetedza kwemukati. Saka nekudaro, zvine musoro kufunga kuti iyo OnePlus 8 uye 8 Pro ichave neyakanyanya kuyeukwa inosanganisirwa kune iyo inonyanya kupinda-chikamu chemhando.
Pamusoro pemakamera anoenda, zvinogoneka iyo OnePlus 8 Pro inogona kuratidza Samsung itsva 108MP sensor kunge lens yekutanga. Isu tinotarisira akawanda mafoni ekuremekedza muna 2020 kuisa iyi sensor uye OnePlus inowanzo opts yekupedzisira-uye-huru. Nekudaro, kana iyo Pro yekusiyana iinayo, saka zvinokwanisika kuti iyo vanilla musiyano isingadaro. Izvo zvakare zvinoita OnePlus inonamira ne 48MP kana 64MP sensor kune ese mairi zvishandiso.
Related: ImwePlus Concept Imwe maoko-on
Takazonzwa runyerekupe kuti OnePlus inogona pakupedzisira ipa wairesi isina waya ne8 akateerana. Iyo yekuChina brand iri zvakare nhengo yakazara yeWireless Power Consortium (WPC) ikozvino. Iri boka rakagadzira uye rinotsigira Qi isina waya yekuchaja standard.
Kana chiri chokwadi, kudhirowa pasina waya unongouya chete kune iyo Pro Pro uye pamwe wacho 8. Hazvitike kuti unouya kuma8 Lite. Zvakare zvakare, OnePlus's WPC nhengo inogona kureva kuti inoburitsa earbuds ine waya isina waya yekuchaja kana imwe mhando yechigadzirwa pachinzvimbo chisina waya yekuchaira foni.
Sezvambotaurwa, zvinoita zvakare kuti OnePlus iri kubvisa iyo pop-up selfie cam kubva kune OnePlus 8 Pro kubatsira pakupedzisira kuwana IP rating. Uku kungofungidzira izvozvi, asi hatigone kufunga nezvechimwe chikonzero chekuti OnePlus ikande iyo-screen ye7 Pro.
Kana iri OnePlus 8 Lite, mapaipi eiyo mudziyo haazivikanwe zvachose panguva yacho. Kana OnePlus ichida kuti ive bhajeti inotarisana nebhajeti mumakwikwi nefoni dzakaita seaya Google Pixel 3a, ingangodaro isina Snapdragon 865 pane bhodhi. Panzvimbo iyoyo, inogona kunge iine Snapdragon 700 kana kunyange mazana matanhatu akatevedzana processor. Izvo zvakare zvinokwanisika ichanyika pazasi iyo 600GB / 6GB yekuyeuka maitiro e128. Zvinosuruvarisa, hapana nzira yekufungidzira chaizvo izvo OnePlus inofunga nezvefoni iyi sezvo tisina kumboona chero chinhu chakadai.
Chekupedzisira, hapana kana chimwe chakashandurwa pamusoro chinoisa zvigunwe zvigunwe, saka zvingangoita isu tichaona ekunze mu-kuratidza zvigunwe zvekunzwa zvigunwe mumatanho manomwe anotungamira kune iyo 7 zvinyorwa.
OnePlus 8 yakatevedzana: Mutengo uye kuwanikwa
OnePlus 'smartphones inowana yakawanda uye inodhura gore rega. Iko hakuna chikonzero chekufunga kuti gore rino richava chero rakasiyana. Isu hatizive kuti yakawanda mafoni ichave yakadii asi tinogona kutarisa pamitengo ye2019 kuita fungidziro yakanaka.
Heano mitengo ye2019 OnePlus kune yega yega yemhando yemhando:
OnePlus 7 Pro (6GB / 128GB) - $ 669
OnePlus 7T (8GB / 128GB) - $ 599
OnePlus 7T Pro (8GB / 256GB) - € 759 (~ $ 845)
Tichifunga nezvazvo, zvine musoro kufunga kuti OnePlus 8 ingatanga pamadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu emadhora uye iyo OnePlus 600 Pro ingangotanga madhora mazana manomwe nemakumi manomwe emadhora. Aya angori ekufungidzira asi zvakanyanya kusawoneka kuti zvishandiso zvive zvakachipa pane izvo.
Zvekare zvakare, kune iyo OnePlus 8 Lite, isu hatina chinyorwa kuti chichaitei. Kana OnePlus ichida kuti ikwikwidze neakakurumbira Google Pixel 3a, tinofungidzira kuti ingangouya pasi pe $ 400 Nekudaro, kufungidzira kwako kwakanaka sokwedu kwazvino.
Nezve kuwanikwa, iyo OnePlus 7 haina kutanga muUS, nekambani panzvimbo pezvo inotarisisa chete pane OnePlus 7 Pro. Zvinogoneka kuti OnePlus inogona kudzokorora zano iri muna 2020.
Nekudaro, isu takanzwa runyerekupe runopesana neizvi. Maererano ne Android Police, iyo OnePlus 8 (kwete iyo Pro Pro) inogona kumira paVerizon Wireless pano muUS. Iyi ingangove nguva yekutanga OnePlus kuvhura smartphone paBig Red. Zviri mupfungwa kuti izvo zvinoita kuti OnePlus 8 igone paVerizon uye iyo OnePlus 8 Pro inogona kugara pamba iripo yekambani, T-Mobile.
Zvakare mukana wakanaka wekuti OnePlus 8 Lite ingasaona kuburitswa muUS sezvo kambani inogona kunge ichitarisisa kuti pamisika iri kubuda senge India.
Ndidzo chete zvatinoziva nezve OnePlus 8, OnePlus 8 Lite, uye OnePlus 8 Pro kusvika zvino. Tiudzei mumazita ari pasi apa kana isu takatadza chero chinhu kana chii chamuri kutarisira zvakanyanya kubva kune OnePlus 'inotevera smartphone.
Ongorora: One Plus Nord N200 5G inounza 5G kune vazhinji
OnePlus Nord 2 Kutanga Maonero: Iyo Dimension kubhejera kunobhadhara here?